Rehefa mampiasa ny Screen Print amin'ny Ubuntu ianao, tsy mandika ny fakana an-tsoratra intsony ve izany amin'ny clipboard? Azonao atao ny mamaha azy | Avy amin'ny Linux
Isaac | | Fisehoana / personalization, Tutorials / Manuals / Tips
Amin'ny kinova alohan'ny Ubuntu 18.x azonao ampiasaina ny lakilen'ny Print Screen hialana amin'ny rindranasa fisamborana ary ahafahanao misafidy eo amin'ny fakana tahaka ny sary nalaina tamina tabilao na ny fitehirizana ny rakitra sary amin'izay anarana tianao. Saingy amin'ny fiovana an-tsary nijaly tamin'ireo kinova Ubuntu vaovao ireo dia ho hitanao izao fa misy ilay fampiharana Pikantsary azonao atao ny manohy mampiasa tsy misy olana.
Raha tokony ho izany dia somary mankaleo kokoa ianao raha tsy manokatra azy na mitazona azy ao anaty mpandefa mba hampiasa matetika. Ny olana dia raha manindry ianao Pirinty natao pirinty tsy misy hita eo amin'ny efijery. Ny zavatra ataony ho azy dia ny maka sy mitahiry ny sary nalaina tao amin'ny lahatahiry Sary ao amin'ny lahatahiry tranonao. Ilaina izany raha te hitahiry ny fakana ianao hampiasaina any aoriana. Fa olona maro, toa ahy, no mampiasa azy io amin'izao fotoana izao hanovana azy.
Amin'ireny tranga ireny, ny rafitra taloha dia azo ampiharina kokoa. Mba hamahana izany ary inona rehefa manindry Print Screen ianao dia maka ny sarin'ny efijery ary avelany eo amin'ny solaitrabe mba hahafahanao mametaka azy avy hatrany ao anaty fampiharana sary na sary retouching, azonao atao ny mamaha azy amin'ny fomba tena tsotra. Mila manova ny hitsin-dàlan'ny keyboard fotsiny ianao eo amin'ny birao GNOME.
Tsotra ny tokony hataonao. Just araho ireto dingana ireto:
Sokafy ny fampiharana fanahafana rafitra amin'ny Ubuntu 18.x na avo kokoa.
Eo amin'ny sisiny, eo amin'ireo safidy, tadiavo fitaovana.
Ao anatiny mankany Ohatra.
Ankehitriny, eo amin'ny sehatry ny kitendry, tadiavo ireo saha roa mifanaraka amin'ny pikantsary ho an'ny hitsin-dàlana fitendry izay asehoko anao amin'ny sary lehibe amin'ity lahatsoratra ity.
Ho hitanao izany amin'ny Mandika pikantsary amin'ny solaitrabe, ny hitsin-dalana dia Ctrl + efijery pirinty. Mandritra izany fotoana izany ao amin'ny Mitahiry pikantsary amin'ny sary mametraka samirery Pirinty natao pirinty. Ny tokony hataonao dia ny manambola azy:
Tsindrio ilay voalohany ary hiseho ny varavarankely mangataka anao hikasika ny lakile na fanalahidy tianao hamboarina ho an'io hetsika io. Tsindrio avy eo Print Screen.
Ary amin'ny safidy faharoa, kitiho eo ary avy eo mifanindry Ctrl + Print Screen.
Ekeo dia mandehana.
Manomboka izao, isaky ny mikasika ny Screen Print ianao dia voasambotra ao amin'ny hela-tsilaka ary azonao apetaka ao anaty rindrambaiko fisoratana anarana na antontan-taratasin'ny birao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Rehefa mampiasa ny Screen Print amin'ny Ubuntu ianao, tsy mandika ny fakana an-tsoratra intsony ve izany amin'ny clipboard? Azonao atao ny mamaha azy
Fanontaniana avy amin'ny neophyte, ary maninona no manova zavatra niasa ary ankehitriny tsy maintsy mandeha manamboatra fanitsiana ianao.
Mania inona no manova ireo zavatra niasa tsara mba tsy hahalala hoe inona ny fepetra fandriam-pahalemana na ny fandaharana ... Kitiho ny efijery ary avelao irery ny hitsin-dàlana fitendry ho an'ny mpampiasa efa zatra izany.
Izy ireo dia karazana zavatra izay mitondra ny vao tonga amin'ny Windows lavitra ny Linux.